Faahfaahino ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay Gaalkacyo – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Faahfaahino ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay Gaalkacyo
–Inta la xaqiijiyay 30 qof oo shacab iyo ciidan isugu jira ayaa ku dhintay kadib markii qof isku xiray waxyaabaha Qaraxa uu isku qarxiyay banaanka garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise ee Gaalkacyo oo ay ka socotay soo dhawaynta Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Goobjoogayaal ayaa sheegaya in xilliga qaraxu dhacayey ay garoonka galayeen saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka.
Saraakiisha la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qaraxa ayaa waxaa ka mid ah, Taliyihii Danab ee Galmudug Gen.Mukhtaar, Taliye Ku-xigeenkii ciidanka Danab ee magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug Generaal Maarsho.
Waxaa sidoo kale la xaqiijiyay duqii hore ee Gaalkacyo ee dhinaca Puntland Maxamuud Yaasiin Axmed Tumay.
Waxaa dhaawac culus oo soo gaaray u geeriyooday taliyahii qeybta 21-aad ee Ciidanka xooga Qooje digaari.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay Mas’uuliyadda weerarkaas kadib war qoraal ah oo kasoo baxay oo lagu faafiyey warbaahinta ku hadasho afkooda.
Xaaladda guud ee magalaada ayaa caawa kacsan, mana jiro weli wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee qeybta Galmudug ee koofurta Gaalkacyo.
Previous Qarax ma’uuliyiin iyo shacab ay ku dhinteen oo ka dhacay Gaalkacyo
Next MUSHARAX XILDHIBAAN MAXAMED CABDULQAADIR OO KULAN QADO AH U SAMEEYAY WAXGARADKA DEGMADA DHAHAR